जम्मू कश्मीर विवादमा नेपाल मौन रहनुनै उचीतः पूर्व राजदुत उपाध्याय
पंकज धामी शुक्रवार, श्रावण २४, २०७६, २३:४६:०० मा प्रकाशित
जम्मू कश्मीर मुद्दाले अहिले भारत र पाकिस्तानबीच झन् तनाब बढेकोछ । दुबै देशले व्यापारिक र कुटनीतिक सम्बन्ध तोडेका छन्, भने रेलमार्ग समेत बन्द गरिएको छ । भारत पाकिस्तानको विवादकै कारण लामो समयदेखि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क चलायमान हुन सकेको छैन् । पछिल्लो समय देखिएको विवादले सार्कलाई कस्तो असर पार्छ ? सार्क राष्ट्रको अध्यक्षको हैसियतले नेपालले यो विषयमा कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ? भन्ने विषयमा भारतका लागि पूर्व राजदुत दीपकुमार उपाध्यायसँग जनतापाटीका पंकज धामीले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ सम्पादित अंशः
जम्मू कश्मीरका विषषयमा भारत र पाकिस्ताबीच देखिएको विवादले सार्कको भविष्यलाई कस्तो असर गर्छ ?
दुईटा कुरा हर्नेुहोस् । जम्मू कश्मीर मित्र राष्ट्र भारतको एउटा सार्वभौम परिवेश जस्तै हो । १९४७ देखी काश्मीरसँगको सम्भौता, त्यो बेलाको संविधानमा उल्लेख रहेका विषयमध्ये तस्वीरमा हेर्दा कश्मीरका जनताले लाभ लिन सकेनन् । उनीहरुको आन्तरिका विषयको रुपमा हामीले बुझ्नुपर्छ । त्यहाँका जनताले के भन्छन् ? के चाहान्छन् ? भन्ने मुख्य कुरा हो । त्यहाँका जनतालाई विश्वासमा लिने । त्यहाँका राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिने । सरकारको आफ्नो दायित्व भित्रको कुरा हो । त्यसपछि यो विषयमा पाकिस्तानको खरो प्रतिकृया आउनु स्वभाविक थियो, आएको छ । यसमा अन्य शक्ति राष्ट्रहरुको कस्तो भूमिका हुन्छ । त्यसमा आउने केहीदिनपछि घटनाक्रमले स्पष्ट पार्दै जान्छ । त्यसकारण नेपालले हतारिएर त्यो बारेमा अहिले आफैले टिकाटिप्पणी गर्दा उचित हुँदैन् भन्ने मलाई लाग्छ ।
जहाँसम्म सार्कको सवाल छ । तपाईं हामीलाई थाहा छ । सार्कको स्थापना देखिनै एउटा पनि सदस्य राष्ट्रको असहमति भयो भने यो अगाडी बढ्न सक्दैन भन्ने छ । र भारत र पाकिस्तानको बीचमा आतंकवादका घटनाहरुले सम्बन्ध विग्रेको थियो । अहिले त्यो चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला हाम्रा पनि केही नैतिक मूल्यमान्यताहरु छन्, अध्यक्ष राष्ट्र भएको नाताले । यस्तो अवस्थामा सचेतनाका हिसाबले आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नुपर्छ । हाम्रो चाहाना त हो सार्क पनि मर्नुहुँदैन् । त्यसैगरि बिबिआइएन (बंगलादेश भुटान, भारत नेपाल) त्यसैगरि विमस्टेक पनि शक्तिशाली रुपमा आए । त्यसैले सार्क कमजोर बन्दै गएको हो । तर समयचक्र एकदम शक्तिशाली हुन्छ । अहिले तत्काल हामीले चाहेर मात्रै सार्कले गति लिने वा सम्मेलन हुने कुराहरु मैले देख्दिन् ।
पछिल्लो पटक २०१६ मा सार्क सम्मेलन गर्ने घोषणा गरिएपनि भारत यसबाट पछि हट्यो । सार्कको भविष्यलाई लिएर हामीले चिन्ता लिने की नलिने ?
जुन दिन भारत र पाकिस्तानबीच एउटा फेरी शान्ति र सहमतिको वातावरण बन्छ त्यो दिन यी सबै बादलहरु हट्छन् । त्यसपछि यो सार्कको भूमिका छ त्यो बारेमा गौण गर्नु हुँदैन । हामी यसलाई जिवन्त राख्न चाहान्छाै‌। हामीलाई जति फोरमहरु आएपनि फाइदानै हुन्छ । जस्तो अहिले बिबिआइएनको कुरा गर्दा नेपालको उर्जा भारतको बाटोबिना बंगलादेशमा लैजान सकिँदैन् । भूटानको ग्यास हामीले पाउन सक्दैनौँ । त्यसैले पनि भारतको सहयोग जरुरी हुन्छ । तर फोरममा समझदारी भएपनि कतिपय कुराहरु भारतले पुरा नगरेको स्थिति छ । बिमस्टेकका कुरा छन् । सार्कका कुरा छन् । मैले तपाइलाई भने भारत पाकबीच शान्ति र सद्भावका कुराहरु अगाडि बढ्दैनन् तबसम्म हामीले यो कुरामा रोकिनु नै उपयुक्त हुन्छ ।
सार्क गतिविधि हुनुमा भारतको अरुची हो ?
सार्क मर्ने कुरा पनि हुँदैन् मार्ने कुरा पनि हुँदैन् । परिस्थिती सामान्य भएपछि यसलाई स्वःस्फुर्त रुपमा जगृत गर्न सकिन्छ । त्यो कुरामा हामीले विश्वास राख्नुपर्छ । अहिले एक राष्ट्रले मात्रै सम्मलेन हुँदैन् । यो अगाडि बढ्न सक्दैन् ।
बिमस्टेक, बिबिआइएनलाई सार्कको विकल्पका रुपमा भारतले अगाडि सार्‍यो भन्ने आरोप पनि छन् ?
जुनसुकै पनि कुटनीति भनेको एक कला हो, चातुयर्ता हो । जुनसुकै देशले पनि आ—आफ्नो हित हेर्छ यसलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ । सार्क अध्यक्ष राष्ट्रको नाताले हाम्रो नैतिक जिम्मेवारी छ । यसलाई थाति राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले नकार्नुपर्छ । यसलाई गतिशिल बनाउन हामीले भूमिका खैल्नुपर्छ तर उचित समयमा । अहिले त्यसका लागि समय उपयुक्त छैन् ।
सार्कका विषयमा अहिले नेपालले चुप नै बस्नुपर्छ भन्ने तपाईको धारणा हो ?
अवश्य नै दुबै मुलुकले आफ्नो कुटनीतिज्ञहरुलाई फिर्ता गरेका छन् । केही समय तनावनै देखिन्छ । यस्तो बेलामा हामीले अनावश्यक टिका टिप्पणी गरेर यसको लाभ न हामीले पाउँछौँ । अरु देशलाई यसको लाभ हुन्छ ।
यी दुई देशबीचको तनावले नेपाललाई कस्तो असर गर्छ ?
अहिलेको जस्तो शीतयुद्धले त कुनै असर पर्ने कुरा हुँदैन् । भोली यसैगरि यो घटना विकशित हुँदै गयो । यसले अर्को मोड लियो भने हामीलाई गाह्रो नै हुन्छ । त्यो बेलामा हामी सजक हुनुपर्ने । त्यसका लागि हामीले आफ्नो किसिमका सुरक्षाका रणनीति अपनाउनुपर्ने हुन्छ । तर त्यो अवस्था अहिले आउँदैन् ।
अहिलेसम्म सरकारले जम्मू कश्मीर मामलामा आप्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन् । के यो मामलामा नेपाल मौन रहनु नै ठिक छ ?
एक दुई दिन अझै नेपालले केही नबोल्नु नै राम्रो । तर सधैभरी हामीले मौन रहनुपनि उपयुक्त होइन् ।
बजेटका विषयमा के भन्छन् सांसदहरु ? बुधबार सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बजेटका विषयमा सांसदहरुले मिश्रित प्रतिकृया दिएका छन् । केहीले बजेट वितरणमुखि भएको आरोप लगाएका छन् । भने केही सांसदहरुले पहिलेकै बजेटको निरन्तरता भउको बताएका छन् । बुधवार, जेठ १५, २०७६, १९:५५:००
सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा नेकपाको रोक सोमवार, भदौ ९, २०७६, २३:०७:००